Doorashada lama faragelin karo: Waraaq ay Dowladda Farmaajo u dirtay UN | KEYDMEDIA ONLINE
Doorashada lama faragelin karo: Waraaq ay Dowladda Farmaajo u dirtay UN
Wasaaradda Arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa waraaq u qortay Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay taasoo ay kaga hadleyso waxa ay ugu yeertay madax-bannaanida Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa caawa waraaq ku socota madaxweynaha Golaha Ammaanka ee Qaramda Midoobay u dirtay Linda Thomas-Greenfield taas oo jawaab u ah hadal ay bishii hore ee March 31 -keedii ay Golaha ka sheegtay.
Dowladdu waxay warqadda ku xustay saddex qodob oo muhiim ah:
Doorashooyinka qaran ee Soomaaliya, sida ummadaha kale ee madaxbanaan, ayaa weli ah arrin qaran waxaa ka tashanaya oo go'aan ka gaaraya hay'adaha qaranka ee dalka sida ku cad sharciga Lr. 30 ayaa meel mariyey Baarlamanka.
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay u aragtaa heshiiskii 17-kii Sebtember inuu saldhig u yahay Geedi socodka doorashada wuxuuna taaganyahay talooyinka Giddigii Farsamada Baydhabo ee 16 -kii Febraayo, oo aan wax shuruud ah lagu xidhin.
Cabashada ammaanka doorashada si loo xalliyo, dowladdu waxay xaqiijinaysaa in Guddiga Amniga Doorashada Qaranka uu hoggaankeeda qaban doonno Ra’iisul Wasaaraha, kaas oo la wareegi doona xalka arrimaha amniga.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxay ku adkeysanaysaa in loo madax banneeyo arrimaha la xiriira doorashada, iyadoo ay horay uga soo hor jeesteen mucaaradka habka uu wax ku wado madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo oo u muuqda mid uu isku dooranayo mar kale.
Madaxweyne Farmaajo waxa uu diiday maadaama muddo xileedkiisu dhammaaday in uu wareejiyo awoodda ciidanka, islamarkaana uu qoro waraaq rasmi ah, iyadoo loo soo jeediyay in uu talada ku wareejiyo Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xil gaarsiinta ah ee Soomaaliya.
Waxaa kale ee uu diiday tala soo jeedinta madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaar, Golaha Aqalka Sare, Midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya iyo ururrada Bulshada rayidka, dhammaantood waxa ay soo jeediyeen in shirka wada hadallada arrimaha doorashooyinka la ballaariyo, si dalka ay uga dhacdo doorasho hufan oo xur iyo xalaal ah!
Halkan hoose ka akhriso waraaqda: